ဇင်လင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 6
ဇင်လင်း – အဂတိတရားကင်းစင်တဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဖော်ဆောင်ရေး (မိုးမခ) မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၆ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအနက်က LDC အဆင့် အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေး၊ နှစ်ပေါင်း...
ဇင်လင်း – သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အစိုးရနှင့်အတူ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ် ဖွင့်လှစ်ရေး….
ဇင်လင်း – သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အစိုးရနှင့်အတူ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ် ဖွင့်လှစ်ရေး…. (မိုးမခ) မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၆ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လကစတင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက် ကျရောက်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၅၄ နှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက်...
ဇင်လင်း – တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကျယ်ဦးမယ့် မြန်မာ့နိုင်ငံအရေး
ဇင်လင်း – တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကျယ်ဦးမယ့် မြန်မာ့နိုင်ငံအရေး (မိုးမခ) မတ် ၃၊ ၂၀၁၆ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အာရှဒေသမှာ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးအရ ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခံရရေးကိစ္စဟာ တပ်မတော် နဲ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့...
ဇင်လင်း – မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပြဿနာ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၆ အခုတလော အစိုးရအဟောင်းနဲ့ အစိုးရအသစ်တို့ တာဝန် (အာဏာ) အလွှဲအပြောင်း မလုပ်နိုင်ခင်စပ်ကြား ပြဿနာ မျိုးစုံ ပေါ်နေတဲ့...
ဇင်လင်း – ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့ချရေး မအောင်မြင်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်မဟာ မိတ်အဖွဲ့ Myanmar Alliance for...
ဇင်လင်း – “ကိုယ်ကျိုးရှာမှုကို ရှောင် ပြည်သူ့အကျိုးကို ဆောင်”
ဇင်လင်း – “ကိုယ်ကျိုးရှာမှုကို ရှောင် ပြည်သူ့အကျိုးကို ဆောင်” (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းရဲ့ အချိုးအကွေ့အသစ်ကို မကြာမီ မြင်ကြရဖို့အရေးအတွက် ပြည်သူအများ စိတ်လှုပ်ရှား နေကြပါတယ်။ NLD...
ဇင်လင်း – လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အမျိုးသားရေး ဂုဏ်သိက္ခာ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တာ ၆၈ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ် ၇...
ဇင်လင်း – ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့ သတင်းစကား (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးပြန်ပါပြီ။ ဒီနှစ်အတွင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ စီမံအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဖြစ်ရပ်တွေကို...
ဇင်လင်း – လူထုက NLD ကို ဘာကြောင့် မဲပေးခဲ့တာလဲ ? (ဒီလှိုင်းဂျာနယ်) မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ (၈) ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး...
ဇင်လင်း – “ပြည်သူလူထုက အဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ”
ဇင်လင်း – “ပြည်သူလူထုက အဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ” (ဒီလှိုင်းဂျာနယ်) မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ အထူးခြားဆုံးဖြစ်တဲ့ ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို အုံးအုံးကျွက်ကျွက်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီ...
Kachin Refugees – file photo ဇင်လင်း – ဘာကို ပြောင်းရမှန်း မသိသူ ( မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၅ • ဘာကို ပြောင်းရမှာလဲတဲ့……...
ဇင်လင်း – သမိုင်းအသစ် ရေးကြစို့ (ဒီလှိုင်းစာစောင်) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅ ဒီကနေ့ မြန်မာလူထုဟာ “ရွေးကောက်ပွဲ” ကို ထူးထူးခြားခြား အာရုံစူးစိုက်လာတာ တွေ့ရတယ်။ နိုဝင်ဘာ (၈)ရက်နီးလာလေ လူထုရဲ့...
ဇင်လင်း – အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း (သို့မဟုတ်) ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု
ဇင်လင်း – အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း (သို့မဟုတ်) ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၊ ၂၀၁၅ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (Transparency) နဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု...
ဇင်လင်း – မမေ့အပ်သည့် နိုင်ငံ့ သားကောင်းတယောက် ဦးလှသန်း (၁၉၄၇ – ၁၉၉၆)
ဇင်လင်း – မမေ့အပ်သည့် နိုင်ငံ့ သားကောင်းတယောက် ဦးလှသန်း (၁၉၄၇ – ၁၉၉၆) NLD ပါတီ၏ ၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကုိုယ်စားလှယ်၊ ကိုကိုးကျွန်းမဲဆန္ဒနယ် (မိုးမခ) သြဂုတ်...
Cartoon Saw Ngo – 2011 ဇင်လင်း – ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ ဆန္ဒမဲ တစ်ပြား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၅ ဒီ ဆောင်းပါးကို စတင်ရေးသားချိန်မှာ ၂၀၁၅...
ဇင်လင်း – ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၅ ——– ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဟာ ရက်ပေါင်း (၁၀၀) သာသာပဲ လိုပါတော့တယ်။ လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသက်တမ်း (၄) နှစ်...
ဇင်လင်း – ကိုစည်သူ (သို့မဟုတ်) လိုချင်တာတွေ အများကြီးအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့သူ
ဇင်လင်း – ကိုစည်သူ (သို့မဟုတ်) လိုချင်တာတွေ အများကြီးအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့သူ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၅ စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ရတဲ့ရက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့ အခါတိုင်း မိမိနဲ့တွေ့ဆုံသိကျွမ်းခဲ့ပြီးနောက်၊ ကျဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့...
ဇင်လင်း – ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ မျှော်တိုင်းဝေးမယ့် ရွှေပြည်တော် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၅ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က...